Isebenza phezu okubi izindikimba abafundi efana kakhulu, ngoba kumnandi kangaka - ukuzizwa njengendlela umlobi bese ucoca ngalokho uyakukhathalela ngempela! Leyo misebenzi zokudala isiRashiya manje atholakala jikelele imfundo ikharikhulamu. Kodwa, naphezu ukukhanga yabo, ngokuvamile lapho ekhaya isethwe ukuba babhale indaba, "Umngane wami omkhulu", abafundi abaningi elahlekile futhi abazi kuphi ukuqala.
Yenza uhlelo lokusebenzisa umsebenzi
Noma yimuphi umsebenzi kufanele abe izingxenye ezilandelayo: singeniso, umtimba kanye nesiphetfo. Lapho uthisha ecela umsebenzi ofanayo, ngokuvamile yenza futhi ifomethi oyifunayo. Mayelana ubungani nomuntu othize, ungakwazi ukubhala mini-indzaba nobe indzaba umnyuziki enemininingwane. Yini ukubhala ukusebenza lo msebenzi zokudala? Ake uzicabange indima umlobi ofuna zona umfundi nendoda uyazi yena futhi iseduze kakhulu. Imfihlo iyiphi imisebenzi ezinhle ukubhala ngaphandle ecabanga abayobe lokuyifunda. Futhi akusho ukuthi kule ndaba, iphepha kufanele babeka zonke izimfihlo umngane wakhe. Kodwa uma indaba enikelwe incazelo-efunda nayo esikoleni, ukhuluma ngani kulo njengomfula uthisha uzohlola umsebenzi, Angazi wakhe uqobo.
Umugqa wokuqala uhlale siyisinqumo esinzima kunazo zonke
Kanjani ukuqala indaba "Umngane wami omkhulu"? Esethulweni sayo, ungabhala imisho 1-2 mayelana ubungani wabelane. Kuyafaneleka ukuba alethe abathile lesisho noma ethi ngale ndaba noma ukukhuluma ngalokho abangane bakhe futhi eziningi nabangane, kodwa abaseduze oyedwa. Akukona ukukhetha okubi - ukuqala umfundi ukulungiselela ukuqhubekisela phambili indaba. Ungabhala kanye: "Namuhla Ngifuna ukuhlangabezana Kate, yena - umngane wami omkhulu ...". Mini-indzaba mayelana umngane ingaqukatha kokukodwa sipho, ngemva kwalokho ungakwazi uqhubekele incazelo.
Yini ubhala mayelana umngane?
Qala indaba umngane oseduze kuyafaneleka nge umlando omfushane ukuphola. Sitshele kuphi futhi nini wahlangana okokuqala, okwenza abangane futhi waqala uvale contact. Okulandelayo, ungacacisa ukwaziswa okuvamile mayelana nokuthi le ntombazanyana, emingaki yena, lapho uqhutshelwa, ukwenza lokho. indzaba eningiliziwe "Umngane wami omkhulu" kuzomele sifake incazelo yokubukeka kwakhe futhi uhlamvu. Ngonanzelelo izinzuzo kanye nemiphumela ethile engathandeki kungcono uthule. Nokho, bambalwa babo kungafakwa le ncazelo ngendlela encokola. Isibonelo esihle: "intombi yami eningi ukukhuluma, kodwa yena uyakwazi ukutshela i umlando esimangalisayo nesifundisayo." Engxenyeni efanayo umsebenzi kungafaka ukulandisa mayelana uyahlanganyela futhi izithakazelo ezivamile. Bhala ngalokho kufanele basizane, sifana uhamba nge-spare time sakho futhi yini imidlalo zidlala. Umbono ezithakazelisayo indaba ngakolunye - ukumtshela ngento ezihlekisayo noma efundisayo, okwenzeka emadilini kanye nani.
Isiphetho namathiphu lokubhala Tindzaba
Indlela baqede kungaba indaba mayelana umngane? Indzaba "Umngane wami omkhulu" kufanele abe ucezu yokugcina. Kuyafaneleka ukuthi niyajabula ukuthi ukuphila kwakho kuyinto umuntu emangalisayo, futhi ufuna ukulondoloza ubuhlobo naye kukho konke ukuphila kwakhe. Uma umsebenzi usuphothuliwe, hhayi lazy kakhulu ukufunda ngokucophelela indaba ebhaliwe. Umgomo wakho oyinhloko ngokubhala lo msebenzi - kuyathakazelisa ukhulume zabanye, ukuzama ukumambula akhe identity. Bad umqondo - obala agxeke Amakhasi intombi abasebenzela esikoleni, abhale mayelana ukuthukwa siqu izingxabano. Uneminyaka namanje abangane? Ngakho konke okubi - lena kuphela ingane endlini izinto. Indzaba-incazelo ka umngane wakhe omkhulu - akusiwona indawo indaba zonke izimfihlo siqu. Ngenxa yalokho umsebenzi kufanele ube indaba ethakazelisayo futhi omuhle kakhulu.
Enkulisa uhlobo kuhlanganiswe - siyini lesi sikhungo?
Bokusebenza komuntu ekwindla - isihloko isifundo abafundi abasebasha
Amahlathi nezinhlamvu ezihlangene lezihlahla. Climate kwamahlathi exubile kanye lezihlahla
Zone-Arctic: kwebalingisi, incazelo, izici
Ukubaluleka lokudla ku sawo esiningi
New crossovers Vaz: intengo. Nini crossover entsha Vaz